Badumele uZandile Gumede eqokelwa esishayamthetho - Ilanga News
Home Izindaba Badumele uZandile Gumede eqokelwa esishayamthetho
Badumele uZandile Gumede eqokelwa esishayamthetho
Amaqembu aphikisayo athi lokhu kuyichilo elesabekayo
UNKK Zandile Gumede uthathwe noNkk Nontembeko Boyce ngemuva
KUDUMALE amaqembu aphikisayo KwaZulu-Natal ngokuqokwa kuka-Nkk Zandile Gumede owayeyimeya yeTheku njengelungu lesishayamthetho sakulesi sifundazwe, ogcotshwe izolo ngo-Lwesithathu evala isikhala sika-Mnu Ricardo Mthembu osanda kudlula emhlabeni.
Ukuqokwa kukaNkk Gumede ngethikithi le-ANC kunenge amaqembu ahlukene okubalwa i-IFP, iDA neNFP.
La maqembu achaze ukuqokwa kwalo mholi njengehlazo elinyanyekayo kubantu bakulesi sifundazwe, kwazise wahoxiswa esikhundleni sokuba yimeya yeTheku emuva kwezinsolo zokwehlulwa wumsebenzi, kanti wayekade emisiwe kulandela ukubhekana namacala ahlukene athinta inkohlakalo yamathenda kumasipala ayewuphethe, okumanje usabhekene nawo.
UNkk Gumede usagqigqa inkantolo ngenxa yala macala abhekene nawo nabanye abaholi nezikhulu ezahlukene kulo masipala.
UMnu Velenkosini Hlabisa ongumengameli we-IFP futhi ohola leli qembu esiShayamthetho saKwaZulu-Natal, uchaze isenzo se-ANC sokuqoka uNkk Gumede njengehlazo elingachazeki.
Uthe lesi senzo sikhomba ngokusobala ukuthi i-ANC kayizimisele ngokulwa nenkohlakalo edlangile kulesi sifundazwe.
Uthe isishayamthetho kasiyona indawo yokulahla imfucuza.
Umholi weDA KwaZulu-Natal, uMnu Zwakele Mncwango, uthe badumele ngokuqokwa kukaNkk Gumede ekubeni esabhekene namacala, wathi kodwa kabethuki kakhulu ngalesi senzo.
Uthe bekusamele uNkk Gumede anikwe isikhathi sokuhlanza igama lakhe enkantolo njengoba nabo bekholwa wukuthi umuntu umsulwa kuze kube utholwa yinkantolo esemthethweni ukuthi unecala.
“Besisalindele athole ithuba lakhe enkantolo ahlanze igama lakhe, kodwa i-ANC ikhombisile ukuthi kayinandaba nokulwa nenkohlakalo,” kusho uMnu Mncwango.
Uthe kujwayelekile vele ukuthi kwi-ANC uma umholi ebhekene nezinsolo zenkohlakalo asuswe esikhundleni anikezwe esinye ngaphandle kokubhekana namacala awenzile.
UNkk Nicole Graham ophethe isigungu saleli qembu eThekwini, naye ukhale esifanayo noMnu Mncwango njengoba echaze lesi senzo njengesibhibiza ngenhlanekela abantu baseThekwini.
Uthe beyi-DA badiniwe ngalesi senzo kwazise uNkk Gumede wacishe waguqisa uMasipala we-Theku ngesikhathi esayimeya.
Ukhale ngokuthi lo mholi usengaphandle ngebheyili ngecala lenkohlakalo elithinta ukuqoqwa kukadoti, ngakho ukuqokwa kwakhe kusho ukuthi usazophila impilo entofontofo ngemali yabakhokhi bentela.
UMnu Nhlakanipho Ntombela okhulumela i-ANC KwaZulu-Natal, uthe bayazi ukuthi bakhona abantu abazogxeka ukuqokwa kuka-Nkk Gumede besebenzisa indaba yamacala abhekene nawo.
Uthe basamile kwelokuthi umuntu umsulwa kuze kube utholwa yinkantolo yomthetho enecala, okwamanje akukho okuphambene nokuqokwa kwakhe njengelungu lesishayamthetho.
Uthe beyi-ANC KwaZulu-Natal, bayakholelwa ekuthuthukiseni abesifazane kanti ngesipiliyoni anaso uNkk Gumede, bayethemba ukuthi uzokwenza umehluko omkhulu.
UNkk Gumede uzwakalise ukujabula ngokuqokwa kwakhe esishayamthetho, eveza nokuthi kwenzeke kahle ngenyanga yokubungaza abesifazane eNingizimu Afrika.
Previous articleUmnyango ufisa sande isibalo sabesifazane abakwezolimo
Next article“Ngifisa ukube ngasikhipha isisu”